galmada Archives - Page 14 of 17 - iftineducation.com
Nabsi jacayl Tani waa sheeko jacayl ah
Nabsi jacayl Tani waa sheeko jacayl ah oo aad u xiiso badan waana sheeko mala awaal ah waaxayna ka hadlaysaa jacaylka dhabta in uu nafsi leeyahay ood maruun soo galidoonto iyo jacaylka shilin raaca ah ee wax jacayl ah lays ku qabin in uu mar uun dhamaanayo waana waaqica ka jira geyga soomaalida sheekadani waxay maskaxdiisa ka soo maaxatay kana…
10 SIYABOO AAD KU KASBAAN KARTAA NAF KAA JANJEERTA
Dunidaan aynu guudkeeda saaranahay waxa ku nool qomiyado kala duwan kuwaas oo aan isku diin, isku af, iyo isku dhaqan toona ahayn, balse wax ay kawada siman yihiin jaceylka, hinaasaha ama maseyrka iyo waxyaaba kale. Qarniyadii hore jaceylka waxaa uu ahaa mid ay dadku aad u qadariyaan aadna u qiimeeyaan. Waxaynu ognahay in dad badan ay u dhinteen jaceylka halka…
Fariin gaaban oo ay idiin soo gudbineyso www.iftineducation.com waxa uu qeyb ka yahay Fariimaha ay shabakada ugu tala gashay mucaashaqiinta ku tixin qormooyinka jaceylka la xiriira ee ay shabakada soo gudbiso had iyo jeeer . Hamigii nafteydaay Haween boqoradeeday Hasaawe taan wadaagnee Hami guur u qaadaay Hoy in aan wada galno Hanad ii xanbaartaan Haminayaa macaaney Hadal aan dhameeye Howsha…
Nolosha:Qodobkan oo ah ka uu qoraalkani ku socd ayaa ah : “Naftaada waan kaa jeclahay”. Waxaa hubaal ah in maanta aduunyada dhan walbaa horumar laga gaadhay, oo is badal weyni ku yimid dhinacyo badan oo ku salaysan nolosha aadmaha. Haddaba jacaylku waa shayga ugu qaalisan ama cilmiga ugu macaa ee uu Eeba aduunyada inagu siiyay. Waxaase mudooyin kii danbe isa…
Hadimada jaceylka ee lagu dhaco waa fikrad qancisa gabar waliba oo haweenka aad ayay u jecel yihiin jaceylka iyo Romantic in ka badan ragga . Inkastoo farqi uu u dhaxeeyo jaceylka ninka iyo gabarta ee ku aadan dhanka muujinta hadana haweenka habab gaar ah ayay ku muujiyaan jaceylka . 1- U Muujinta Jaceylka Hab Run Ah : qaarkood wax ay…
Waxaa jira hal-ku-dheg carbeed oo macnihiisu yahay, “Gabadha doqonta ahi waa sida neefta Khardal la yidhaado, oo neerfayaasha ayey dishaa” Waxa kale ooh al-ku-dhegyadooda ka mid ah, “Dad waxa ugu farxad iyo badhaadhe badan doqonta, waayo iskuma mashquuliso waxa hareeraheeda ka dhacaya, nafteedana saamayn kuma yeeshaan” Charles P. Baudelaire oo ahaa gabayaa weyn oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa isna…
Aqriste marka waxaan rabaa in aan wax uun kaaga fasiro sida aad ku kala ogaan kartid qofka ku jecel iyo qofka iska dhigaa inuu ku jecelyahay adiga. Hadaba iska jir qofka leh tilmaaha aan hoos ku xusi doono, kuna sheego doono inuu ku jecelyahay/jeceshahay kuma jeclo, mana ku jeclaan doono: Waa qof aan ku qaddarineynin, isla markaasna ay la xunyihiin…
Fariin gaaban oo ay idiin soo gudbineyso www.Allsiyaasad.com waxa uu qeyb ka yahay Fariimaha ay shabakada ugu tala gashay mucaashaqiinta ku tixin qormooyinka jaceylka la xiriira ee ay shabakada soo gudbiso had iyo jeeer . Hamigii nafteydaay Haween boqoradeeday Hasaawe taan wadaagnee Hami guur u qaadaay Hoy in aan wada galno Hanad ii xanbaartaan Haminayaa macaaney Hadal aan dhameeye Howsha…
Qofka bani’aadamka ah way ku adkaataa in uu inta badan kala saaro jacaylka dhabta ah iyo ka khiyaaliga ah, laakiin waxa daruuri ah in qofku marka uu damco in uu kala garto kalgacalka runta ah iyo ka been abuurka ah ama jacaylka dhabta ah iyo ka dhalanteedka ah. Dadkuna kala saarida labada nooc ee jacaylka way ku kala aragti duwan…
Inta badan Guurku waa mid ku dhisan Kalsooni & is aaminaad dhex marta labada lamaane ee nolol wadaaga ah , Haasaawaha Jaceylkuna waa mid inta badan la isku xog wareesto labada dhinac kahor Guurka. Aduun howli kama dhamaato ismaandhaaf bini’aadamna waa wax soo jireen ah, cilmiga iyo garashaduna waa furaha guusha aduun iyo aakhiro, waqtiba waqtiga ka danbeeya waxaa sii…